EyoKwindla 14, 2012 ngexesha 4:20 pm
ubomi elide transposh, nokuba Ndikhalaze, Nangoku ukuyisebenzisa 🙂
Andizange ukuhlaziya kodwa oko uguqulelo oludlulileyo ndiya kwenjenjalo khangela
EyoKwindla 27, 2012 ngexesha 2:27 mna
Andiqondi kuyihlaziya ngoku kuba mna andazi nawuphi na umsebenzi omtsha uthelekise uguqulelo oludala. Yaye ngaba ufaka umsebenzi nto leyo enokwenza wonke iphepha kwiphepha yokwenene .html, oku kungenza WordPress ngokukhawuleza..
Enkosi u kakhulu..
EyoKwindla 27, 2012 ngexesha 10:53 mna
Ukuhlaziya jikelele yinto elungileyo, malunga nokwenza kube ngokukhawuleza, usenokucinga usebenzisa plugin cache (ezifana wpsupercache) ukuba mhlawumbi uya ukuphumeza ukuphucuka osikhangelayo.
EyoKwindla 30, 2012 ngexesha 4:31 pm
Ndinqwenela ukusebenzisa eli iplagi ixesha elide. Kodwa Ukubamba yethu wandixelela site sindisa yethu CPU, ntoni le plugin kungabangela le iingxaki?
EyoKwindla 31, 2012 ngexesha 2:28 pm
Le plugin wenza kudla ixesha CPU, okungenza wehlisa xa usebenzisa inkxaso isisombululo ukugcina kwimemori, ezifana memcached okanye APC
ungabuza umboneleli yakho ibamba ngabo
UTshazimpuzi 7, 2012 ngexesha 5:26 mna
hi, I ndaphawula, ukuba emva kokuba ukutshintsha ulwimi ukutshintsha isimo yomsebenzisi nolo lundwendwe obhalisiweyo.
njani ukusombulula le ngxaki?
UTshazimpuzi 28, 2012 ngexesha 11:42 pm
Andiqinisekanga Ndiyaqonda ukuba becacisa oko impikiswano, ukuzama ukunika iinkcukacha ezininzi ngoko ke ndiza kukwazi ukunceda.
Isilimela 17, 2012 ngexesha 8:02 mna
В WP 3.4 + Transposh 0.8.2 le ngxaki musa ukubukela, mhlawumbi isizathu WP.
UTshazimpuzi 9, 2012 ngexesha 7:07 pm
Java Great, Ipholile.
Kodwa ke syntax nguqulelo kakhulu ezingaqhelekanga, kukho nayiphi na indlela ukuba amalungu isigwebo kwenye indawo xa uhlela?
UTshazimpuzi 28, 2012 ngexesha 11:39 pm
Kunjalo ukusebenza loo, kunjalo kukho constants ezimbalwa ezinokuthi zitshintshwe phezulu kwe fayile parser.php, nangona oku mhlawumbi akayi kuxhaswa kwixesha elizayo, kwaye mhlawumbi engekhoyo iinguqulelo zakho zangoku.
UCanzibe 2, 2012 ngexesha 3:43 pm
Molo apho ! walungisa nje inguqulo French kweposi lakho 😉 Ukwenza website yakho inxaxheba ngumbono enkulu, njengokuba plugin yakho!
Sibonga ngokuba umsebenzi wenu mkhulu ngokusinceda lokuvula emideni yethu iilwimi, kunye Happy Birthday ukuba Transposh!
UCanzibe 2, 2012 ngexesha 3:48 pm
Owu ngendlela, phakathi IsiNgesi nesi-French ukuma izibizo vs. izichazi luvulwa, kunye nendlela trasposh ngayo kusikwe izivakalisi ngendlela ngokuzenzekelayo, yenza ezinye izivakalisi sound ungapheleli akukho ndlela oda amagama ngokufanelekileyo… Ingaba kukho nayiphi na indlela yokusebenzisa i ponctuation ukugawula izivakalisi zibe ziingceba kunokuba ukuyeke kakhulu ngokuzenzekelayo?
Sibonga kwakhona 🙂
UCanzibe 3, 2012 ngexesha 9:58 mna
Enkosi ukulungisa inguqulo French, kakhulu. Care ukwenza okufanayo kwi plugin ngokwayo?
Ngokuphathelene ahlabayo oluzenzekelayo, ke ukuba random, uya kunqumla kwi ezikhoyo html, amanani, zokuloba kunye html. Abo ke imithetho zingatshintshwa kwifayile kohlobo, yaye sisebenza ekuphuculeni inkqubo yonke. Ngaphandle iingxaki ngaye kukho iingxaki ezinxulumene ngokomxholo ezifana amagama kunye nemiba kabini intsingiselo kunye nesini kwezinye iilwimi. Ngoko impendulo “usasebenza ngaloo”.
Enkosi izimvo kunye negalelo
UCanzibe 3, 2012 ngexesha 11:16 mna
Nika kum iifayile kunye “kwenziwa kanjani” yaye ndiza kwenza konke okusemandleni am ukuguqulela plugin.
enye ingxaki: umfanekiso ayi veli kwinguqulelo IsiNgesi / enye French. Ngaba ahlole ku http://www.sahal.fr: XHO “About Alexandre Sahal” / FR “A propos of Alexandre Sahal”
UCanzibe 3, 2012 ngexesha 11:44 mna
Ekuqaleni, malunga umfanekiso ongekho. isihloko lakho isebenzisa into ebizwa timthumb (leyo Ndikhumbula yaba ngumba yokhuseleko ngaxa lithile) kwaye kudla imithombo akaloncedo, Mna ndicebisa ukuba usebenzisa i tag umfanekiso oluqhelekileyo kwaye izinto ziza mhlawumbi ukusebenza nje.
Ngokuphathelele ukuguqulelwa plugin, iifayili sele zinikwe koko babe, indlela elula ukuguqulela i .po / .mo iifayile kangangoko ndiyabona ukuba ukusebenzisa i plugin ebizwa “zalapha codestyling” nto leyo kakhulu ngqo phambili.
Kwakhona ifayile encinane ukuguqulela ukuba hlela yekhompyutha kwi ikloko yeyure eziyi / lang ulawulo.
ngokwendalo – credit inikwa kubaguquleli 😉
UCanzibe 16, 2012 ngexesha 10:46 mna
Hi ndingangi ndifuna ukuba unengxaki kunokuba umdla, kubonakala ngathi lwimi ezininzi (Isibhulu, Icelandic yaye ngaphezulu) zineengxaki and do not translate izinto menu, kunye izihloko kuwo onke, kwaye ufake umbhalo nto.. ngoko kukho iibhloko nje into kubo.
Ekuqaleni ndandicinga oku kubangelwa cufon, kodwa ndakha elicwangcisiweyo ukuba ukususa cufon kuzo zonke iilwimi ngaphandle olungagqibekanga yam. kodwa yayo isenzeka.
Kutheni oku kwenzeka?
Ngaba usebenzisa i google API inakho iqhosha lo mba?
Siyabonga naluphi uncedo
UCanzibe 20, 2012 ngexesha 10:33 mna
Emva kokuba isuswe cufon for non ulwimi olungagqibekanga, ukuba usule database translation esizenzekelayo zokusebenza ukuze 3rd WordPress utils?
Amir Colnect uthi
Isilimela 29, 2012 ngexesha 2:43 pm
Ukukhangela phambili uphuhliso lwexesha elizayo kunye nohlaziyo evela Transposh. Ngokuqinisekileyo ke izakuba ngu umdlalo ukutshintsha imveliso kanye epheleleyo 🙂
EyeKhala 24, 2012 ngexesha 12:45 pm
Le i plugin elihle…I m ongazenzisiyo..
Ndithanda ukukubuza njani i mhlawumbi itshintshe izicwangciso zosapho lohobo okubhaliweyo eliguqulelwe ngolu hlobo livela…
Umzekelo…ukuba i babe IsiNgesi nangesiRoma…njani i ukutshintsha usapho lohlobo Greek (Arial lets say – isizathu ngokungagqibekanga okufika kunye nosapho serif).
Enkosi…ngokuba yonke into…
EyeNkanga 21, 2012 ngexesha 10:13 mna
plugin yakho enkulu.
EtiMnga 5, 2012 ngexesha 1:45 mna